अमेजन बिक्री कसरी बढावा र उत्तम विक्रेता बन्यो?
हाम्रो दिनमा, अमेजन संसारको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेशनल रिटेलर हो जहाँ तपाईं सबै स्वादको लागि उत्पादन पाउन सक्नुहुनेछ. यो प्लेटफार्म दुवै बिक्रेता र तेस्रो पक्षका विक्रेताहरूको लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ. यदि तपाईंसँग आफ्नो व्यापार विकासको लागि सहि दृष्टिकोण छ भने, अमेजनले उच्च राजस्व र उच्च पद स्थितिको साथ प्रशंसा गर्नेछन् - casino royal club mobile.
अमेजन रिटेलिङ प्लेटफर्मको लोकप्रियता हरेक दिन बढ्दै गएको छ, अधिक र अधिक वफादार ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न. सांख्यिकीय डेटा अनुसार, कम्तीमा 88,000 डलरले यो प्लेटफर्ममा विश्वभर हरेक मिनेट खर्च गरेको छ. बिक्रेता अमेजनले प्लेटफर्मको रूपमा आकर्षित गर्छन् जहाँ उनीहरूले सबै चीजहरू फेला पार्न सक्छन्, अझ पनि Google बाट. Google अझै पनि बहुमूल्य स्रोत हो, तर जानकारीको लागि, उत्पादन शोधकर्ताहरू छैनन्.
सबैको साथ भने, मलाई लाग्छ कि तपाईसँग यो साझा गर्ने राम्रो विचार हो कि अमेजन बिक्रीमा कसरी वृद्धि र तपाईंको रैंकिंग स्थिति सुधार गर्ने बारे केहि सुझावहरू हुनेछ।. त्यसोभए, हामी यी व्यावहारिक सुझावहरू र चालहरू नजिकको नजिक पुगौं.
अमेजन मा सकारात्मक समीक्षाहरु उत्पन्न गर्न को तरिका
Amazon मा ग्राहक समीक्षा को शक्ति कम. तिनीहरूसँग अमेजन खोज परिणाम पृष्ठमा तपाईंको सूचीबद्ध रेटिङमा प्राथमिक प्रभाव रहेको छ र त तपाईंको अनुकूलन प्रयासहरू सुधार वा विनाश गर्न सक्नुहुन्छ. हालको उद्योगका तथ्याङ्कका अनुसार, 88% उपभोक्ताहरू भन्छन् कि उनीहरूलाई अनलाइन समीक्षाहरूमा व्यक्तिगत सिफारिसको रूपमा अधिक भरोसा राख्छन् र हालको समीक्षा र तारा रेटिङको संख्या र गुणस्तरमा आधारित उनीहरूको खरिद निर्णय गर्छन्।.
यही कारण छ कि तपाइँ आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तर र जैविक समीक्षाहरू उत्पन्न गर्न सबै भन्दा राम्रो बनाउन आवश्यक छ. भिडियो सामग्री वा छविहरूसँग समीक्षाहरू आश्चर्य गर्न सक्दछन्. त्यसोभए, तपाइँका नियमित ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि लामो र वर्णनात्मक समीक्षाहरू छोड्नका लागि अन्य विक्रेताहरू सही निर्णय लिन मद्दत गर्न. यदि तपाइँ आफ्नो स्थानीय उत्पादनमा स्थानीय रूपमा जान्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई जानुहोस् र समीक्षाहरू स्थगित गर्ने बारे सोध्नुहोस्.
तथापि, तपाईंलाई सजग हुनु आवश्यक छ कि अमेजन सक्रिय रूपमा गैर-कार्बनिक विरुद्ध लडिरहेको छ वा अन्य शब्दहरूमा, प्रोत्साहित गरिएका समीक्षाहरू. यही कारणले तपाइँलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँका सबै उत्पादन समीक्षा समान बनाइन्छ र प्राकृतिक हेर्नु हुन्छ.
तपाईंको सबै उत्पादन समीक्षाहरू व्यवस्थित गर्न र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूको बारेमा सचेत रहन, तपाइँ यस उद्देश्यका लागि विशेष अनुसन्धान सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।. उदाहरणका लागि, प्रतिक्रिया 5-उपकरणले प्रतिक्रिया पेश गरेको भोल्युम बढाउन मद्दत गर्दछ र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूमा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ.
तपाईंको सूचीबद्ध अनुकूलन र सुधारमा कार्य
अमेजन रिंगिङ् प्रणाली न केवल उत्पाद समीक्षाहरू, बिक्रेता मूल्याङ्कन र मूल्य, तर उत्पादन सूचीबद्ध कसरी गर्ने तरीका पनि. Google मा जस्तै, तपाईंलाई सामरिक रूपमा आवश्यक छ शीर्षकमा, बुलेट बिन्दुहरू र विवरणमा लक्षित लक्षित शब्दहरू. अमेजन व्यापारीहरूलाई एक उत्पादको शीर्षक प्रासंगिक खोजी सर्तहरू र वर्णनात्मक शब्दहरूको साथ सामान बनाउन अवसर प्रदान गर्दछ. अमेजन सूचीबद्ध अनुकूलन अनुकूलन को यो पहलू Google मा फरक छ जहाँ तपाईंलाई एक छोटो र सटीक शीर्षक को लागी केवल एक लक्षित खोज शब्द संग हुनु पर्छ. तथापि, अमेजनले दुवै बटहरू र प्रयोगकर्ताहरू खोज्न प्रक्रियालाई सरल बनाउन चाहन्छ, तिनीहरूलाई एकैचोटि स्पष्ट विवरणको विवरण प्रदान गर्दछ. अमेजनले शीर्षकमा ब्रान्डमा निम्न उत्पादन सुविधाहरू समावेश गर्न सुझाव दिन्छ: ब्रान्ड, वर्णन, उत्पादन लाइन, सामग्री, रङ, आकार, र मात्रा. तथापि, किनमेल र प्राथमिक जानकारीमा ध्यान दिन बनाउनको लागि तपाइँको शीर्षकमा विज्ञापन रङ्गहरू समावेश गर्न आवश्यक पर्दैन.
तपाईंको सूचीको लागि सबै भन्दा सान्दर्भिक र लक्षित सर्त सर्तहरू पत्ता लगाउन, म तपाईलाई अमेजन किवर्ड उपकरण प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु, जसले अमेजनको स्वतन्त्र सेवाको लागी लोकप्रिय लम्बाई पूरै कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न प्रयोग गर्दछ।. यसबाहेक, यो उपकरण प्रयोग गरी, तपाइँ प्रत्येक चयन गरिएको खोज शब्दको खोजी भोल्युमको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुनेछ.
अमेज़न मा किन्नुहोस बक्से जीतने को तरिका
Amazon is very competitive search platform। तपाईंलाई राम्रो बिक्री इतिहास र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण नीतिको आवश्यकता पर्दछ. Amazon ले कसरी किन्नुहोस् किन्क्स बक्स जित्न सख्त नियमहरू सेट गर्छ, तर त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले यसलाई जित्न सक्ने क्षमतालाई प्रभाव पार्छ।.
पहिलो, तपाईंलाई आफ्नो खरीद बक्स योग्यता बढाउन आवश्यक छ. यसो गर्न, तपाइँसँग एक व्यावसायिक विक्रेता खाता हुनुपर्दछ र कम्तिमा तीन महिनाको लागि तपाईको सामानको व्यापार गर्नु पर्छ. अर्को तरिका यो तपाईं कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ कि अमेजन पूरा सेवाहरू प्रयोग गरेर.
यसबाहेक, अमेजन किन्क्स बक्स जित्नका लागि तपाईसँग उच्च प्रदर्शनको स्तर हुनुपर्छ. उच्च प्रदर्शन स्तर प्रभावित हुन सक्छ यस्तो कारक सफल सफल, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, उत्कृष्ट ग्राहक मेट्रिक्स, र डिलिवरी सेवा गुणको इतिहासको रूपमा.
तपाईंको ल्यान्ड मूल्यको लागि विशेष ध्यान (भुक्तानी शुल्कको साथ वास्तविक उत्पादन मूल्य) को भुक्तानी गर्नु पर्छ।. आफ्नो स्थान मा प्रतिस्पर्धी रहन को लागी, तपाईं बजार आला विश्लेषण को संचालन गर्नु पर्छ या फीडवीसी या Teikametricks को रूप मा विशेष repricing उपकरणहरुको उपयोग गर्नु पर्छ।. यी उपकरणहरूले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा तपाईंको बजार आला भित्र सम्बन्धित उत्पादनको मूल्यहरूको निरीक्षण गर्न मद्दत गर्नेछ. यो उपकरणको प्रयोग गरेर, तपाईले मूल्य निर्धारण नीतिमा सबै आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईले कसैलाई कम मूल्य प्रदान गर्दछ तब तपाईसँग छ।. Amazon
यदि तपाईं अमेजन मा आफ्नो लाभ को अधिकतम गर्न चाहते हो, अमेज़न प्रायोजित उत्पाद कार्यक्रम को कोशिश करो. यसले तपाईँलाई खोजी सामग्री तल दायाँ-हात स्तम्भ वा विवरण पृष्ठहरूमा प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्नेछ. अमेजन पीपीसी अनलाइन व्यापारीहरूको लागि अमेजनको खोज नतिजाको शीर्षमा एक स्थान खरीद गर्न एक राम्रो तरिका हो. यस कार्यक्रमको अनुसार, एक व्यापारीले प्रत्येक पटक खोज परिणाममा ग्राहकलाई विज्ञापनमा क्लिक गर्दछन्. अधिक प्रतिस्पर्धी आला तपाईं खुदरा रिटेल, क्लिक को उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ.
ग्राहकहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र ई-मेल मार्केटिंग को लागी यस्ता संचार विधिहरू अमेजनमा प्रतिबन्धित छन्।. यद्यपि, यसको अर्थ छैन कि तपाईं श्रोटरहरूलाई तपाइँको अमेजन भण्डारमा आकर्षित गर्न कुनै पनि प्रचार प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न. तपाईं यो पोस्ट गर्न ब्लग पोस्टिंग र सोशल मिडिया मार्केटिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, तपाईं आफ्नो ब्लग सँग सम्बन्धित व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ. Quora, Hubpages, and Go जस्तै प्लेटफार्महरू तपाईंको विषयमा सामग्री टुक्राहरू लेख्नको लागि एक उत्कृष्ट स्थान हो, जहाँ तपाइँ आफ्नो अमेजन भण्डारमा लिङ्क छोड्न सक्नुहुनेछ।.